अल्ट्रासोनिक फैलावले रेजिनमा न्यानो फिलरहरूको कार्यकुशल र एकसमान समावेशीकरणको लागि अनुमति दिन्छ। अल्ट्रासोनिक dispersers सजिलै उच्च ठोस एकाग्रता ह्यान्डल गर्न सक्छन् समान कण वितरणको साथ अत्यधिक भरिएको रेजिन उत्पादन गर्न। Sonication सबै प्रकारको परम्परागत रेजिन, पोलमर र फिलरहरूसँग उपयुक्त छ।
भरिएको रेजिन र पोलिमरहरू
भरिएको रेजिन र पोलमर उच्च प्रदर्शन कोटिंग्स, पेन्ट्स, प्लास्टिक सामग्रीको साथै भौतिक विज्ञानको औद्योगिक निर्माणमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यौगिकहरूको रूपमा परिचित, यी मिश्रणहरूमा रेजिन वा पोलीमर, योजकहरू र फिलरहरू हुन्छन्। एडिटिभहरू स्ट्याबिलाइजरहरू र फिलरहरू जस्ता कम्पोनेन्टहरू हुन्, जसले समग्र विशेष विशेषता दिन्छ। उदाहरण को लागी, नानो कण फिलर कम्पोसाइटलाई टेन्सिल शक्ति, स्क्र्याच प्रतिरोध, UV प्रतिरोध, थर्मो-स्थायित्व वा एक रालमा लचीलापन थपेर सुदृढ पार्न सक्छ। स्टेबिलाइजरहरू समयसँगै र बिभिन्न सर्तहरूको अन्तर्गत राल निर्माणको संरचना कायम राख्न प्रयोग गरिन्छ। अत्यधिक भरिएको रेजिनले यसको विशेष सामग्री गुणहरू विशेष प्रकारका फिलरहरू र प्रयोग हुने थपहरूबाट प्राप्त गर्दछ। विशेष गरी न्यानो आकारका कणहरू उनीहरूको विशेष सुविधाहरू र उत्कृष्ट सुदृढीकरण क्षमताका लागि प्रसिद्ध छन्। कार्यात्मक फिलरहरू उच्च प्रदर्शन सामग्रीका लागि महत्त्वपूर्ण घटक हुन्। रेजिनहरू र बहुलक कम्पोजिटहरूमा अत्यधिक-कार्यशील कणहरूको रूपमा यस्ता फिलर्सहरू समावेश गर्न, तिनीहरूलाई एकल-तितर्य कणको रूपमा मिश्रितमा मिसिन आवश्यक छ। अल्ट्रासोनिक फैलावले काभिटेशनल हाई-शियर फोर्सलाई लागू गर्दछ, जसले न्यानो-स्केलमा मिल कणहरूलाई रेजिन र पोलिमरमा डीगग्लोमरेट र मिल कणहरू। अल्ट्रासोनिक वितरक सजिलैसँग उच्च चिप्लस सामग्री र उच्च ठोस लोड ह्यान्डल गर्न सक्दछ। नतिजा स्वरूप, अल्ट्रासोनिक dispersers उच्च गुणवत्ता को अत्यधिक भरिएको रेजिन उत्पादन।
अल्ट्रासोनिक dispersers सजिलै उच्च ठोस लोड र चिपचिलोपन ह्यान्डल गर्न सक्छन् र अत्यधिक भरिएको रेजिन र कम्पोजिट को उत्पादन को लागी आदर्श हो। चित्रले अल्ट्रासोनिक इनलाइन वितरक देखाउँदछ UIP16000hdT।
अत्यधिक भरिएको रेजिनको अल्ट्रासोनिक उत्पादनका फाइदाहरू
ब्याच वा फ्लो मोड
अत्यधिक पुन: उत्पादन योग्य परिणामहरू
अल्ट्रासोनिक रूपमा उत्पादित भरिएका रेजिन र कम्पोजिटहरूले समान सामग्री न्यानो-फैलाउने फिलरहरूको कारण उच्च सामग्री गुणहरू प्रदान गर्दछ। उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक फैलाव अन्तर्गत कार्यात्मक फिलरको साथ रालको संयोजन गरेर, परिणामस्वरूप समग्रले उत्कृष्ट भौतिक शक्ति र प्रदर्शन देखाउँदछ जस्तै फाइबर सुदृढीकरण, इलेक्ट्रिक र थर्मल चालकता, अप्टिकल गुणहरू र लचीलापन।
अल्ट्रासोनिक वितरकहरूलाई अत्यधिक भरिएको रेजिन, पोलीमर र अन्य कम्पोजिटहरूको मास्टर ब्याचहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले उच्च प्रदर्शनको साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दछ।
अत्यधिक भरिएको रेजिनको अल्ट्रासोनिक उत्पादन
अल्ट्रासोनिक dispersers अत्यधिक कार्यात्मक न्यानो कणहरु प्रशोधन को उत्कृष्ट क्षमता को लागी परिचित छन्। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्स उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रासोनिकेटरहरू विश्वसनीय ढंगले उच्च आयामहरू वितरण गर्दछन्, जुन एकै प्रकारको निलम्बनमा न्याग्न सामग्री फैलाउन र डिग्लुमेरेट गर्न आवश्यक छ। उच्च घर्षण र उच्च ठोस एकाग्रता कुनै समस्या छैन। हाम्रो अल्ट्रासोनिक फ्लो-थ्रु रियाक्टरहरूसँग, उच्च चिपचिपा, टाँस्ने सामग्रीहरू पनि उच्च दक्षता र विश्वसनीयताका साथ प्रशोधन हुन्छन्। तसर्थ, अल्ट्रासोनिक dispersers अत्यधिक भरिएको रेजिन र कम्पोजिट को उत्पादन को लागी आदर्श हो।
अल्ट्रासोनिक dispersers राल र पॉलिमर को कुनै पनि प्रकारको ह्यान्डल गर्न सक्छन्, जस्तै epoxy रेजिन, पॉलिस्टर रेजिन, विनाइल एस्टर, पॉलिमर र जैव-पॉलिमर, रंग र कोटिंग्स।
कुनै पनि प्रकारको additives र कार्यात्मक फिलरर तपाईंको सूत्र नुस्खा अनुसार कम्पोजिट उत्पादन गर्न थप्न सकिन्छ। सामान्यतया प्रयोग भराव र भरिएका रेजिनहरूका लागि additives मा उच्च प्रदर्शन न्यानो कणहरू जस्तै CNTs, TiO2, SiO2, BaSO4, graphene, ग्राफीन अक्साइड, Al2O3 नानो प्लेटलेट्स (कोरन्ड्रम), र pig रंगद्रव्यहरू समावेश गर्दछ।
यी फिलरहरू र योजकहरूलाई रेजिनमा समाहित गरिन्छ ताकि तिनीहरूलाई उत्कृष्ट सामग्री सुविधाहरू दिनको लागि जस्तै स्क्रैच प्रतिरोध, टेन्सिल शक्ति, यूवी प्रतिरोध, चमक, लचकता, अप्टिकल गुण आदि। अल्ट्रासोनिक फैलावको साथ, अपवादात्मक कम्पोजिट प्रदर्शन विश्वसनीय र पुनउत्पादक रूपमा प्राप्त गरिन्छ।
अल्ट्रासोनिक गीला-मिलिंग र फैलाउने कण आकार घटाउन को लागी एक अत्यधिक कुशल विधि छ, जस्तै TiO को2
को प्राविधिक रेखाचित्र UIP4000hdT, 000००० वाटको शक्तिशाली औद्योगिक उच्च-शियर मिक्सर अत्यधिक भरिएको रेजिन र न्यानो कम्पोजिटहरूको इनलाइन उत्पादनको लागि।
अत्यधिक भरिएको रेजिनको अल्ट्रासोनिक टोल-निर्माण
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्सले टोल निर्माण वा अत्यधिक भरिएको रेजिनको अनुबंध निर्माणको सेवा प्रदान गर्दछ। हामी हाम्रो हाई-पावर औद्योगिक अल्ट्रासोनिक वितरकहरू प्रयोग गर्छौं उच्च प्रदर्शन भरिएका रेजिनहरू कस्टम अनुरूप हाम्रो अनुबंध साझेदारको आवश्यकता अनुसार।
यसबाहेक, हामी मानक भरिएका इपॉक्सी रेजिनहरूको धेरै मात्रामा प्रस्ताव गर्दछौं, जहाँ सीएनटी, टीओओ २, सीओ २ वा ग्राफीन विभिन्न सांद्रतामा अल्ट्रासोनिक फैलाव मार्फत समान रूपमा समावेश गरिएको छ। हाम्रो अत्यधिक भरिएको रेजिनहरू र हाम्रो टोल निर्माण सेवाहरूको बारेमा बढि जानकारीको लागि हामीलाई सोध्नुहोस्!
भरिएको रेजिनको उत्पादनको लागि उच्च-शक्ति अल्ट्रासोनिक Dispersers
हिलस्चर अल्ट्रासोनिक्स उच्च-प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक dispersers अत्यधिक भरिएको रेजिन र कम्पोजिटहरूको निर्माण जस्ता भारी शुल्क अनुप्रयोगहरूको लागि उत्पादन, वितरण र वितरण गर्दछ। हिलस्चर अल्ट्रासोनिकेटरहरू न्यानो-सामग्रीलाई रेजिन, पोलिमर, पेन्ट र अन्य उच्च प्रदर्शन सामग्रीहरूमा तितरबित गर्नको लागि विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
Hielscher अल्ट्रासोनिक्स’ औद्योगिक अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर लगातार धेरै उच्च आयाम वितरण गर्न सक्छ। २००µm सम्मको एम्प्लिट्यूडहरू सजिलै २//7 अपरेशनमा चलाउन सकिन्छ। उच्च आयाममा एक अल्ट्रासोनिक वितरक अपरेट गर्न र आयाम को ठीक समायोजन गर्न को लागी अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया शर्तहरु भरिएको रेजिन र कम्पोजिट को निर्माण गर्न अनुकूलन गर्न आवश्यक छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया प्यारामिटर दबाव हो। उन्नत दवावमा, अल्ट्रासोनिक cavitation र यसको कतरनी सेनाको तीव्रता तीव्र छ। हिल्सचरको अल्ट्रासोनिक रिएक्टरहरू दबाब दिन सकिन्छ। प्लगेबल प्रेशर सेन्सर तारले अल्ट्रासोनिक जेनेरेटरमा, जहाँ प्रशोधन प्यारामिटरहरू जस्तै अल्ट्रासोनिक उर्जा, तापमान, दबाव र समय स्वचालित रूपमा बिल्ट-इन SD कार्डमा भण्डारण गरिन्छ।
प्रक्रिया निगरानी र डाटा रेकर्डि continuous निरन्तर प्रक्रिया मानकीकरण र उत्पाद गुणवत्ताको लागि महत्त्वपूर्ण छ। स्वचालित रूपमा रेकर्ड गरिएको प्रक्रिया डाटा पहुँच गरेर, तपाईं अघिल्लो Sonication रनहरूमा संशोधन गर्न सक्नुहुनेछ र परिणामलाई मूल्याate्कन गर्न सक्नुहुन्छ।
अर्को प्रयोगकर्ता मैत्री सुविधा हाम्रो डिजिटल अल्ट्रासोनिक प्रणाली को ब्राउजर रिमोट कन्ट्रोल हो। रिमोट ब्राउजर नियन्त्रण मार्फत तपाइँ कहिँ पनि टाढाबाट तपाइँको अल्ट्रासोनिक प्रोसेसर सुरू गर्न, रोक्न, समायोजित गर्न र निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिक वितरकहरू र अत्यधिक भरिएको रेजिन र कम्पोजिटको उत्पादनमा उनीहरूको अनुप्रयोगहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्! यदि तपाईं टोल निर्माण सेवाहरूमा रुचि राख्नुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई प्रस्तावको लागि सोध्नुहोस्!